MARXALADDA MAANTA: Xogta hoose ee Qorraxjoogta iyo Qurbajoogta (Wareysi) | Somaliwayn	Home
Friday, November 4th, 2016 | Posted by Nuur | 726 views	MARXALADDA MAANTA: Xogta hoose ee Qorraxjoogta iyo Qurbajoogta (Wareysi)
Tan iyo markii ay meesha ka baxday Dowladdii Kacaanka AUN Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxaa sii kordhayay barakaca shacabka Soomaaliyeed ay uga hayaamayaan dalka si ay u helaan nolol dhaanta midii ay dalkooda uga soo carareen, taasi oo ay barbar socotay xilkasnimo darro sababtay in la xaalufiyo guud ahaan dalka ilaa aakhirka cagta la mariyay tiirarkii asaaska u ahaa qaranimada dalka.
Muddo 25-sano ah ayaa ka soo wareegatay markii jabhado hubeysan ay jiridaha u siibeen xukuumadii ugu cimriga dheereed ee soo marta dalka Soomaaliya muddo 21-sano ah, hase yeeshee anigoo aan ku dheeraaneynin wixii la soo maray oo u badan burbur iyo baaba’ walow ay sii yaraanayaan fikradihii laga aaminsanaa xukuumadii Kacaanka bacdamaa qarankii iyo heybadii ay Soomaalida lahayd ay halis ku jirto.
Xaaladda maanta dalka oo ifineysa isbedelka siyaasadeed iyo doorashooyinka dadban ee lagu soo dhisayo dowlad Federaal ah ayaa waxaa iska wareystay Soomaalida u kala baxday Qurbajoogta oo ah kuwoodii dalka ka cararay iyo Qorraxjoogta oo ah shacabka aan marna dalka meelna uga bixin ee la daalaa dhacaya dhibaatooyinkii kala duwanaa ee 25-ka sano ka badan ka dhacayay guud ahaan dalka.
Wareysiga labada dhinac oo u dhacaya dhinac kastaba inuu isagu isu heysto kan saxda ah isla markaana door muuqda ku lahaa xukuumadihii ka dambeeyay dowladdii la riday sanadkii 1991-kii ayaa xaaladu maanta ay taagan tahay in mid kastaba uu yahay kan xaaladda dalka ka saari kara, iyadoo dhinaca qurbajoogta ay ku doodayaan in qorraxjoogta inay dalka ka saari karaan xaaladda adag ee uu ku sugan yahay.
Haddaba is wareysiga labada dhinac oo aan waxba la iskula harin halkaan hoose ka akhriso:-
QURBAJOOGTA: Shirarkeena aan uga hadleyno doorashada dadban ee dalka ka dhaceysa waxaa caqabad ku ah mashruuca dagaallada looga hurinayo magaalada Gaalkacyo ee hadana la leeyahay Imaaraadka Carabta ayay ku heshiiyeen Madaxweynayaasha Gaas iyo Guuleed.
QORRAXJOOGTA: xaaladba xaalad ka darane Allow fanfaniinka doorashada dadban naga mooti.
QURBAJOOGTA: Daandaansiga Dowladda Kenya ku heyso dalkeena oo ku jira xaalad kala guur ah waa inaan guddi uu xubin ka yahay #abukarcawale u saarno.
QORRAXJOOGTA: Dowladaan xilligeeda dhammaaday waxaan ugu baaqayaa inaysan ka faa’iideysan muddo kordhinta macmalka ah.
QURBAJOOGTA: Doorashada dadban ee dalka ka dhaceysa anaga waa inaan ku yeelanaa kuraasta ugu sareysa, waayo ma jirto cid naga mudan maadaama aan dalka ku bixino dhaqaalaha ugu badan.
QORRAXJOOGTA: Doorashada dadban ee dalka ka dhaceysa oo taladeeda loo dhiibay kuwii fashilka keenay waxay la micno tahay waan socon weynaye aan orodno balse waa arkeynaa meeshey salka dhigato sidii roon Ilaahey ayaa og.
QURBAJOOGTA: Haddii aanu nahay muwaadiniinta samaha la jecel dalkooda waa inaan cambaareynaa Tufaafulowga Daahir Calasow la yiraahdo oo shaqo ka dhigtay inuu dalkiisa iyo dadkiisa ceebahooda faafiyo.
QORRAXJOOGTA: Qoraxjoogta Walee Xaaji Muuse Suudi runta ayuu ka sheegay Qurbajoogta u hanqal taagaya kuraasta dowladda cusub markii uu yiri “Kuwa xaarka ariga ka cabsanaya ayaa raba Xildhibaanimo iyo Madaxweyne”.
QURBAJOOGTA: Waxaan hubaa in xarfaan badan oo aan ogahay candhuuftooda dib u laqeen markii ay isku dayeen tartanka labada aqal ee xukuumadda cusub, walee waxbaa ka dhacay.
Waxaa Diyaariyay: Jabriil Maxamuud Nuur (Jabra)
Short URL: http://somaliwayn.org/?p=47318